Ukuthambisa ulusu olubuthathaka: Nivea vs L'Oreal | Amadoda aQinisekileyo
Ukuba zimbini iimveliso umntu ngamnye azisebenzisileyo ngexesha elithile ebomini bakhe, ngokungathandabuzekiyo I-Nivea yaMadoda kunye ne-L'Oreal Expert Men. Zombini ezi zinto zintengiso zibonelela kakhulu ngexabiso elikhulu. Ngeli xesha sigxile kwizithambisi zolusu olubuthathaka. Zisuka nje kufuneka kuthiwe Umgca we-L'Oreal kolu hlobo lolusu luphuculwe ngakumbi kunolowo ulwa naye. Kwelinye icala, uNivea uphumelela umgca wolusu olunamafutha.
Kodwa kule meko sijongana nomgca wezona zikhumba ziethe-ethe kwaye kum, I-L'Oreal ayinakuthelekiswa nanto. Mhlawumbi, ukubeka inqaku elibi, ukupakishwa akufani nokuthanda ezona zinto zintle, ziya kukhetha iiNivea. Ngokwe-texture kunye nephunga, enye evela e-L'Oreal imnandi kakhulu.
Emva koko, kweyona nto ibaluleke ngokwenene, i-hydration, i-L'Oreal nayo iyaphumelela. Kulula kakhulu ukufaka isicelo kwaye nje ukuba usibeke kuwe uziva ulusu luxineke kancinci (Yeyona ngxaki iphambili kolu hlobo lolusu) kunye nokusetyenziswa okuninzi kobuso kugcwele amanzi kwaye imvakalelo yokoma iyanyamalala. I-Nivea inengxaki enkulu yokuba ishiya ulusu lunamafutha, into esohlwaya kakhulu.
Okokugqibela, umahluko wexabiso unokuba lelinye inqaku elibi le L'Oreal, njengoko kubiza kakhulu kwaye kuncinci (50 ml) ye-75 ml yeNivea. Ngayiphi na imeko, eyona ibiza kakhulu ayifikeleli kwi-euro ezingama-10, ngelixa iNivea ihlala ijikeleze i-euro ezisixhenxe. Ke ngoko, lo mahluko mncinci kwixabiso kunye nobukhulu awanelanga ukuthatha uloyiso kude ne-L'Oreal.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Ukuthambisa ulusu olubuthathaka: Nivea vs L'Oreal
Ndiyisebenzisa yonke imihla, inyani kukuba iziphumo ziyaqapheleka okwangoku kwaye ulusu luhlala lonwabile kwaye lome kakhulu emva kweentsuku zokusebenzisa, yiza, ulunge kakhulu,
Ungadibanisa njani amaqhina kunye neehempe ezinemigca?